အွန်လိုင်း PDF ကိုဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို - အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ - 2019
သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးအသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိုသင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ချင်အင်တာနက်ပေါ်ရှိကိုမွငျလြှငျ, VDownloader အစီအစဉ်ကိုဿုံဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်လျော်သည်။ ဆောင်းပါး၌ဤလျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုဖတ်ပါ။
VDaunloder - Microsoft Windows အတွက်တစ်ဦးအလုပ်လုပ်တဲ့ application ကို, သင်သည်သင်၏မီဒီယာဖိုင်နှင့်အတူများစွာသောအခြားအသုံးဝင်သောတာဝန်များကို, ပြဇာတ်ကို download လုပ်ပါပြောင်းနှင့်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆင်ပြေ video download လုပ်ငန်းစဉ်သည်
Youtube ကဲ့သို့သော, ဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါ, သင် download, အဲဒါကို link ကို copy နှင့် VDownloader ဝင်းဒိုးကိုချဲ့ထွင်ချင်ဗီဒီယိုနှင့်အတူစာမျက်နှာရန်သင့် browser မှာသွားပါ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအလိုအလျောက် download link ကိုဖွင့်ကောက်ပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့သင် (အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးများအတွက်) ခလုတ် "ဒေါင်းလုပ်" ကိုနှိပ်ဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်အဘယ်မှာရှိကွန်ပျူတာပေါ်မှာ folder ကိုသတ်မှတ်ဖို့ရှိသည်။
ဒေါင်းလုဒ်ပြီးပြည့်စုံသည်ရှေ့တော်၌ထိုဖိုင်အရွယ်အစား, ဗီဒီယိုအရှည်နှင့်အချိန်ကိုကျန်ရှိနေသေးသောအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်များဒေါင်းလုပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဓိက window တွင်ပြသပါလိမ့်မည်။
တချို့ကဒေါင်းလုပ်လုပ်ကိုဗီဒီယိုစာတန်းထိုးထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။ သငျသညျဒေါင်းလုပ်စတင်ရန်မတိုင်မီအများအပြားအလားတူအစီအစဉ်များကိုမတူဘဲ, VDaunloder တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ download, စာတန်းထိုးပေးထားပါတယ်။
VDownloader သင်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးရွေးချယ်ဖို့သာခွင့်ပြုပေမယ့်ဝန်ဖိုင်အရွယ်အစား: AVI, MOV, OGG, နှင့်အခြားသော။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုထိထိရောကျရောအတူတူ YouTube ဖြင့်, ဥပမာ, ဗီဒီယို, ဒါပေမယ့်လည်းအသံမသာတင်ပေးပါတယ်။ audio ထိုကဲ့သို့သော MP3, WMA, WAV နှင့်အခြားသူများအဖြစ်ကို formats အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ချော downloads, သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အခြားမီဒီယာပလေယာသွားစရာမလိုဘဲ window ကို priloezhniya တိုက်ရိုက်ကစားနိုင်ပါတယ်။
VDownloader သင်တစ်ဦးကို browser ရဲ့အကူအညီနဲ့မှမသုံးပဲ, program ကိုတိုက်ရိုက်ဖိုင်များကိုရှာဖွေခွင့်ပြုထားသည်။ ကိုယ့် keyword ကိုရှာဖွေရေး box ထဲမှာရိုက်ထည့်, ပြီးတော့သင်ကရလဒ်တွေကိုမြင်လိမ့်မည်။
မီဒီယာဖိုင်တွေယူကျု့ဗီဒီယိုကိုခွဲဝေမှုအနေဖြင့်, ဒါပေမယ့်လည်း Facebook က, Vkontakte, Flicr, Vimeo နှင့်အခြားသောနဲ့တူထိုကဲ့သို့သောလူကြိုက်များန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူမသာတင်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်" ကိုကြည့်ပါ။
feeds တွေကိုမှ Subscribe
YouTube နဲ့အခြားဝန်ဆောင်မှုများပေါ်မှာရှိသမျှသင့်ချန်နယ်များ Follow နှင့်အသစ်ဗီဒီယိုများအကြောင်းကြားရလိမ့်မည်။
VDownloader သင်ပြီးသားလက်ျာ format နဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်, ဒါပေမယ့်လည်းကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားဖိုင်တွေကို convert မှသာခွင့်ပြုပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအတစ်ဖိုင်ကိုရွေး, လိုချင်သောပုံစံကိုရွေးချယ် button ကို "ပြောင်း" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
disc ကိုမှ Burn
လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အင်တာနက်သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ပါကနေဒေါင်းလုပ်လုပ် Halyards, (CD-ROM ကိုရေးသားခြင်းလိုအပ်ပါတယ်) disk ကိုရေးသားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
1. အမျိုးမျိုးသောကို web အရင်းအမြစ်များကိုနှင့်အတူထိရောက်သောတင်;
2. built-in converter ကို formats တစ်ခုကျယ်ပြန့်များအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ;
3. disk ကိုဖိုင်များကိုရေးသားခြင်းပံ့ပိုးမှု;
4. feed ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားမှုဖော်ဆောင်ရေး,
5. ရုရှားဘာသာစကားများအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ nice interface ကို။
1. installation ကိုစဉ်အတွင်းတပ်ဆင်ခ Amigo browser ကို VDownloader ဖျက်သိမ်းရန် non-သိသာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
VDownloader - Internet မှဗီဒီယိုများအားဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အရှိဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့ဆော့ဖျဝဲတစျခုဖွစျသညျ။ ဒီထုတ်ကုန်ဖြစ်သောကြောင့်များစွာသော application များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစားထိုးဖွစျလိမျ့မညျ ဒါဟာတဦးတည်းအထုပ်ထဲမှာအမှန်တကယ်အထင်ကြီးစွမ်းရည်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးပါသည်။
အခမဲ့ VDownloader Download
Ummy Video Downloader အခမဲ့ YouTube ကို Downloader Savefrom.net: VC ကိုထံမှအသံဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် browser ကို-based အဖြည့် Freemake Video Downloader
VDownloader - YouTube, MySpace DailyMotion ကနေဗီဒီယိုတွေကိုရှာဖွေပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ့်အခမဲ့လျှောက်လွှာ။ ဒါဟာမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်တွေနဲ့သဟဇာတရှိသူများအပါအဝင်လူကြိုက်အများဆုံးကို formats အတွက်ပို့ကုန်ဗီဒီယိုဖိုင်များထောက်ခံပါတယ်။
ရေးသားသူ: Enrique Puertas
Size ကို: 1 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: Mobile se pdf file kaise banaye. how to CreateaPDF file from your mobile (နိုဝင်ဘာလ 2019).